Zita rake ainzi Ted Bundy - iHorror
musha Zvinotyisa SubgenresCrime True Zita Rake Raive Ted Bundy
Zita Rake Raive Ted Bundy
by Piper St. James January 31, 2020
by Piper St. James January 31, 2020 1,325 maonero
Nhasi Amazon yaburitsa zvinyorwa zvavo Ted Bundy: Kudonha Kwemhondi. Ipo Bundy yakave nekudzoka muziso reruzhinji mumakore mashoma apfuura, akateedzana aya akasarudza kutarisa kubva kune lens nyowani. Iye zvino vakadzi vakanganiswa nemhondi serial vari kutaura kunze.
Zvakatora mazhinji evakadzi makore, kunyangwe makumi emakore kuti vauye pamberi nezviitiko zvavo. Vanopokana kuti nyaya dzavo dzinofuratirwa nenyaya ye "gamba" rerondedzero; ivo vaneta naTed Bundy achikudzwa.
Havasi vazhinji vevaBundy vakaurayiwa vakapukunyuka, asi mukushaikwa kwavo mhuri neshamwari dziri kuvataurira, vazhinji kekutanga. Iwo maHTMLuseries anojekesa aya madzimai munzira idzo dzakapfuura zvinyorwa, zvinyorwa, uye mabhuku vasina. Haasi mazita chete kana mifananidzo. Ivo vanasikana, hanzvadzi, shamwari, vaunodzidza navo. Vakadzi ava vanozopihwa izwi mukati memakumi mana emakore.
Iwo maHTMLuseries anoyeuka maitiro ekutanga ma1970s aive hupfu keg yekusununguka pabonde uye shanduko yeshanduko yevakadzi. Vakadzi vaida kuenzana kwemukana uye kuve nemasimba pamusoro pemiviri yavo, bonde, uye kubereka. Vakange vasingachadi kugarisana nepfungwa yekuonekwa sezvinhu zvepabonde; uye izvozvo zvakapengesa varume vazhinji.
Hazvina kungoonekwa izvi pamakoroji ekoreji nemakirabhu achangovambwa, makirasi ezvidzidzo zvevakadzi, uye misangano, asi mune vezvenhau zvakare. Terevhizheni inoratidza saMary Tyler Moore uye That Musikana vakaratidza vakadzi vakazvimiririra vachirarama hupenyu hwakazvimirira.
Elizabeth naMolly Kendall
Vakadzi vaviri vanodzora rondedzero muchikamu chekutanga ndiElizabeth "Liz" Kendall nemwanasikana wake Molly. Ivo amai nemwanasikana vaive vambopedza makore vachinzvenga sekasi vachitevera Ted Bundy, asi havachisiri kuramba vakanyarara.
Amai Liz Kendall nemwanasikana Molly Kendall
Liz anoyeuka achitanga kusangana nemurume wechidiki anodadisa mukirabhu yehusiku kwaakamukumbira kuti atambe. Kutevera hurukuro akakumbira kutakurwa kuenda kumba kubva kumuenzi akanaka uyo akati zita rake ainzi Ted. Akamukumbira kuti apedze husiku, asi kwete pabonde. Vaviri vakapedza husiku vakarara pamubhedha wake, vakapfeka, pamusoro pemachira.
Mangwanani akatevera Kendall akashamisika kumuka ndokuwana Bundy amuka mangwanani, akamutsa mwanasikana wake kubva pamubhedha muimba yekutandarira, uye aive mukicheni achigadzira kudya kwemangwanani. Uyu ndiwo mufananidzo wakanyanyisa kubva pachikara chakabatana nezita. Kubva pazuva iro zvichienda mberi Bundy akange agara mumhuri yavo yevaviri.
Iyo Kendall naTed
Muchikamu chimwe chema docuseries vaviri ava vanotsanangura musangano wavo wekutanga naBundy. Ivo vanoongorora kwavo kwekutanga kuratidzika, zviitiko, uye avo mana ekutanga makore pamwechete. Liz akatamira kuSeattle aine tarisiro yekushandira iyo University of Washington. Aida kutanga hupenyu hutsva hwese uye wake wemakore matatu mwanasikana aine chinangwa chekupedzisira chekusangana naVaRudyi. Haana kuziva kuti waakasangana naye aizove chero chinhu kunze kweizvozvo.
Pakati peaya makore ekutanga Liz naMolly nhoroondo yekuti mukomana weziso rebhuruu uye vanoshuvira baba nhanho vakazvipindirana sei mumhuri yavo. Bundy aigona kutamba naMolly nevana vemunharaunda. Mhuri isingafungidzirwe yevatatu yaizokoka mukoma waBundy ane makore gumi nemaviri pakubuda.
Bundy uye maKendall
Chikamu chekutanga chinonyora izvi nemifananidzo yakawanda kwazvo yezvinoratidza nguva dzinofadza, ndangariro dzinoyevedza, uye zviso zvinonyemwerera zvekuti unokanganwa kuti uri kuona chiratidziro chemhondi. Iko kunzwisisa kwehupenyu hwaBundy hunokatyamadza hunowanikwa kuropa uye kuuraya kwaanozivikanwa.
Mafungu Anotanga Kuchinja
Kendall akarovera pane wechidiki Bundy uye akanzwa kuti aive muhukama hune rudo kwazvo. Nekudaro, makore zvaakaramba achienderera mireza tsvuku ikatanga kubuda pachena. Makore maviri nehafu muhukama, rinenge gore nehafu pamberi pehumhondi hwekutanga, imwe yemireza yekutanga yakakwira. Bundy aigona kudada kuna Liz nezve kuba.
Icho chiri chinozivikanwa chokwadi Bundy aive kleptomaniac. Zvizhinji zvezvinhu zvega Bundy zvakawanikwa muhupenyu hwake hwese zvakabiwa, uye aifara kumuudza nezve izvi zviitwa. Kwete kungodada chete, asi nekuzvitutumadza.
Panguva iyoyo Bundy aishandirawo bato reRepublican. Rimwe rebasa rake yaive yekumisikidza muvengi mumanyepo akasiyana uye kuunganidza ruzivo. Aizodada nekusazivikanwa uye haana kumbozivikanwa. Apa ndipo apo Bundy akaona kukosha uye simba rekuve chameleon, iro raakashandisa gare gare mukati mehupenyu hwake hwekuuraya.
Zvinoenderana nenhoroondo zhinji, muna Ndira 4, 1974 Bundy akaita humhondi hwake hwekutanga muDunhu reYunivhesiti. Karen Epley haana kumbosangana naBundy asati apinda mumba make ndokumurova noutsinye. Kukuvara kwake kwakajeka kwakakonzera kubvaruka dundira, kukuvara kwehuropi, pamwe nekunzwa uye kuona kurasikirwa.
Akapona Karen Epley
Achiri kurondedzera zvaakaona, Epley anotsanangura ino inguva yake yekutanga kutaura nezvechiitiko ichi. Aida kuve ega uye kuenderera mberi muhupenyu. Nekudaro, akabvumawo kuti paive nemhepo yekuchengeta zvakavanzika zvevapari vemhosva nemhosva dzavo. Pfungwa imwecheteyo "yekudzivirira mupari wemhosva" ichiri kurarama nanhasi, ndosaka vazhinji vakashungurudzwa pabonde vasati vaenderera mberi kunomhan'ara mhosva.
4 mavhiki gare gare
Kwangopera mwedzi muna Ndira 31, Bundy akarova zvakare. Iyi mhosva yaive nezvakawanda zvakafanana nekurwiswa kwaEpley, asi akabatwa Linda Healy haana kurarama. Nhoroondo yaHealy inotaurwa nevaaigara navo nemhuri vanoenderera nezwi rake nenyaya.
Healy aigara mune imba yevasikana apo imba yake yakapazwa uye akarohwa uye akabiwa kubva mukamuri rake. Izvo hazvina kujekeswa kana akange afa kana kuti kwete paakabviswa kubva kwaaigara. Nekudaro, zvakatsanangurwa kuti Bundy akagadzira mubhedha wake kuvhara ropa pametiresi, akabvisa hanzu yake yeropa yekuchengetera muwadhiropu, ndokumupfekedza mbatya dzakachena vasati vamutora kubva pamba.
Panguva ino zvaive pachena kuna Kendall kwaive nekumwe shanduko kunoitika muTed. Imwe yemisiyano inoonekwa ndeyekuti Bundy yaizonyangarika kwemazuva panguva. Ivo zvakare vakaita kurwa kwemazwi, uko kwaakaramba akadzikama zvakagadzikana panguva.
Mwanasikana Molly anorangarirawo nguva idzi. Iye anoyeuka asina kuona Bundy akatenderedza zvakanyanya, pamwe nezviitiko zvishoma zvine hukama zvemhuri pakati pevatatu. Liz akatora izvi iye ndokutanga kunwa. Iye aisaziva kuti hunhu hwake hunoshanduka, kusavapo panyama kubva pahupenyu hwake, uye kushanduka kwemamiriro ekuchinja kwaive nezve kuita naye. Uku ndiko kwaive kutanga kwenguva yaBundy yekuuraya.